I-China ibhokisi yonyulo engenanto yomvelisi kunye noMthengisi | Sihai
Iphepha leP umbala, ushicilelo olwahlukileyo iphepha elingenanto.
Iphepha leP umbala, ushicilelo olwahlukileyo iphepha elingenanto. I-PP yenqanawa yokhetho ithunyelwa e-United States, e-Australia, eNew Zealand nakwamanye amazwe aseNtshona kunyulo lobongameli kunye nolawulo lwentando yesininzi.
Qho ngonyaka, inani elikhulu leebhodi zeebhodi zonyulo kunye neepropu ziveliswa kwaye zithunyelwa eShenzhen Sihai. Zithini izibonelelo zebhodi engenanto yokuvota?
1. Indawo yokubonisa unyulo, nomsebenzi wovoto, ezantsi kwibhokisi yokuvota, ingqokelela yevoti. Amacala kunye neentloko zisetyenziselwa ukuprinta kunye nentengiso. Le ndawo yokubeka umboniso ibekwe kurhulumente nakwindawo nganye ukuqokelela abavoti bengingqi.
2.adopt ip iplati engenamngxuma ehambelana nemilinganiselo yokukhuselwa kwendalo kwe-RoHS yaseYurophu, enezinto eziluhlaza, ezilula kunye nezilungeleyo, ezinokuphinda zisebenze, njl. njalo njalo. Inokwenza ukuba i-UV ikhusele ngokufanelekileyo ukubonisa ngaphandle.
Egqithileyo pp ibhokisi engenziweyo yentengiso
Okulandelayo: pp ibhokisi enencindi yokubonisa